वर्षा: विश्वमा सबैभन्दा बढी वर्षासँगै places ठाउँहरू नेटवर्क मौसम विज्ञान
Places ठाउँहरू जहाँ पानी पर्न रोकिदैन
मोनिका सान्चेज | | मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान
केहीले लामो समय पर्खाइ रहेको वर्षाको पर्खाइमा आकाश हेरिरहेका छन् भने अरूले चाहिं सूर्य बादलबाट बारम्बार देखोस् भन्ने चाहन्छन्। र, अवश्य पनि, तपाईं बस्नुहुने स्थानको मौसम अवस्थाको आदी हुन सक्नुहुन्छ, तर वास्तविकता यो हो कि »यसले सबैलाई मन पराउँदैन"।
के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कुन स्थानहरू जहाँ पानी पर्न व्यावहारिक रूपमा कहिले पनि रोकिँदैन? यस सूचीमा हेर्नुहोस्।
2 पोर्टो लोपेज
3 खासी हिल्स
5 माउन्ट वायालीले (हवाई)
7 मिलफोर्ड ट्र्याक
8 बोर्नियोको जंगल
9 वर्षाको मौसम कस्तो छ?
10 वर्षाको उष्णकटिबंधीय मौसम
11 वर्षाको शीतोष्ण जलवायु
कोलम्बियाको उत्तर पश्चिममा अवस्थित यो उष्णकटिबंधीय जलवायुको साथ यो ज area्गल क्षेत्र केहि पोइन्टहरूमा असाधारण मात्राको रेजिस्टर गर्दछ। १२ मिलिमिटर वर्षाको वर्षा। यो लगभग सबै सम्भावनामा, पूरै ग्रहको क्षेत्र जहाँ यो अत्यधिक वर्षा हुन्छ।
संसारको यो कुनामा कोलम्बिया मा स्थित एक माछा मार्ने गाउँ हो। कोलम्बियाली राष्ट्रिय मौसम सेवाका अनुसार औसत १२ मिलिमिटर वर्ष बाट र यो मात्र होईन, तर १ 1984। 1985 र १ XNUMX .XNUMX बीचमा हरेक दिन पानी पर्यो। त्यो हो, त्यस समयमा तिनीहरू सबै "भिजेका" थिए।
भारतको मेघालय राज्यमा तिनीहरू धेरै पछाडि छैनन्। यो ठाउँ यसको अविश्वसनीय झरना, र यसको विपुल वनस्पति को लागी परिचित छ। Mawsynram को शहर, जो एक औसत छ 11.871mmचेरापुञ्जी नजिकै पछ्याईयो, जसको जनसंख्या १०,००० बासिन्दाहरू हो, र जसको औसत ११,10 मीमी छ।
इक्वेटोरियल गिनीमा, बायोको टापुको दक्षिणमा हामी युरेका भेट्छौं। को वार्षिक औसत वर्षाको साथ 10.450mm र उष्ण कटिबन्धीय ज by्गलले घेरिएको छ, यो निस्सन्देह मौसमको आनन्द लिन ठाउँ हो।
माउन्ट वायालीले (हवाई)
एउटा नामको साथ "अनडुलेटिंग पानी" को अर्थ हामी यस क्षेत्र कत्तिको बरसात छ भनेर एक धारणा लिन सक्दछौं। वा बरु, यो थियो। यो अझै धेरै वर्षा भइरहेको छ, तर खडेरीले उसलाई असर गर्न थालेको छ। अझै, प्रभावशाली रकम अझै रेकर्ड गरिएको छ: 9.763mm वर्ष बाट
यो क्युशुको मुख्य टापुको दक्षिणमा अवस्थित एउटा सानो जापानी टापु हो। यसलाई "अनन्त बाढीको टापु" भनेर चिनिन्छ, किनकि प्रत्येक बर्ष बीच रेकर्डहरू ,4.000,००० र १०,००० मिमी वर्षाको।
न्यूजील्याण्डले अविश्वसनीय सुन्दर प्राकृतिक परिदृश्यको घमण्ड गर्न सक्छ। ती मध्ये एक मिलफोर्ड ट्र्याक हो, जुन दक्षिण टापुमा अवस्थित छ। बीचमा प्रत्येक वर्ष रेकर्ड ,6.000,००० र १०,००० मिमी.
बोर्नोको जung्गलहरू ठूलो वर्षाले पानी पकाउँछन्। विशेष गरी गुन of मुलु ज forest्गलमा, टापुको मुटुमा, केहि १२ मिलिमिटर वार्षिक वर्षा।
वर्षाको मौसम कस्तो छ?
अब जुन हामी जान्दछौं जुन ग्रहमा सबैभन्दा रमणीय स्थानहरू हुन्, कुन राम्रो तरिका पत्ता लगाउन "वर्षा मौसम" को मतलब के हो त्यहाँ बस्नको अर्थ के हो भनेर कम या कम कल्पना प्राप्त गर्न, जुन उपयोगी हुन सक्दछ यदि हामी विशेष गरी आर्द्र ठाउँमा यात्रा गर्न चाहन्छौं भने। ठिक छ, यसमा जानुहोस्:
वर्षाको उष्णकटिबंधीय मौसम
यस मौसमको न्यूनतम तापक्रमको विशेषता रहेको छ १º सेन्टिग्रेड माथि। तिनीहरू इक्वेडर रेखा नजिकको क्षेत्रमा अवस्थित छन् र तीन प्रकार फरक पर्दछ:
इक्वेटोरियल: वर्षभरि प्रशस्त वर्षासहित, यस मौसम भएको क्षेत्रहरूमा हामी विशिष्ट आर्द्र वनहरू भेट्टाउनेछौं। वार्षिक तापक्रम न्यूनतम २०ºC र अधिकतम २º डिग्री सेन्टिग्रेड बीच छ।
ट्रपिकल: यो उत्तर र दक्षिण अक्षांशको १०º र २ºº बीचको हुन्छ। मौसम पनि तातो छ, तर भूमध्यरेखीय भन्दा भिन्न, यसले सुख्खा मौसम गर्छ, जुन जाडो हो।
मानसून: गर्मीमा प्रशस्त वर्षाको साथ, यो मानसूनबाट प्रभावित छ। यो ग्रहको सबैभन्दा चिसो जलवायु हो, तर यसको सुख्खा जाडो मौसम पनि छ। गर्मी तातो र धेरै आर्द्र छ, जबकि जाडो भन्दा सुख्खा छ।
वर्षाको शीतोष्ण जलवायु
शीतोष्ण बरसातको मौसम एक हो जुन चिसो महिनाको बगैंचा हो जसको औसत तापक्रम बीचको हुन्छ 18ºC र -3ºC, र न्यानो महिनाको औसत 10ºC भन्दा उच्च छ। मौसमको तीन मुख्य प्रकारहरू यो समूहसँग सम्बन्धित छ:
समुद्री: यो चक्रवात प्रणालीहरूको प्रभावको क्षेत्र हो जुन º betweenº र º०º अक्षांशको बीचमा रहेको छ। .तुहरू राम्रोसँग परिभाषित छन्।
चिनियाँ: यो उष्णकटिबंधीय वर्षा र शीतोष्ण महाद्वीप बीचको संक्रमणकालीन वातावरण हो। तिनीहरूसँग प्राय: चिसो हिउँ हुन्छ। गर्मी तातो र चिसो छ, तर जाडो हल्का र पानीदार छ।
भूमध्य: यो समशीतोष्ण क्षेत्रको उपोष्णकटिबंधीय मौसम हो। यो º०º र ººº अक्षांश उत्तर र दक्षिणको बीचमा अवस्थित छ। गर्मीको बखत यो खडेरी खडेरीको विशेषता हो; खडेरी जो एक subtropical एन्टिसाइक्लोन को स्थायित्व द्वारा प्रेरित छ। जाडो हल्का हुन्छन्। वर्षा वसन्त र शरद महिनामा केन्द्रित हुन्छ।
के तपाईंलाई थाहा छ संसारमा धेरै वर्षा स्थानहरू छन्? के तपाई अरूलाई चिन्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Places ठाउँहरू जहाँ पानी पर्न रोकिदैन
मलाई यो जानकारी रोचक लाग्दछ, तर अमेजन क्षेत्रमा यो rains००० मिमी भन्दा बढी वर्षा हुन्छ। बर्ष
चाखलाग्दो, तर पानामामा ठाउँहरू छन् प्रति वर्ष mm००० मिमी
ईन्ग्रिड फेसंडा भन्यो
चाखलाग्दो, मलाई प्रकृतिसँग सम्बन्धित सबैकुरा मन पर्छ।
ईन्ग्रिड अनुहारमा जवाफ दिनुहोस्
हामी खुशी छौं कि तपाईको रूचि भएको छ, इंग्रीड 🙂
व्यक्ति जोसँग राष्ट्रिय मौसम सेवाको मापनबाट वा गम्भीर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालयहरूबाट ती मौसम सम्बन्धी सेवाहरू द्वारा दिइएको जिम्मेवार र सत्य डाटा रिपोर्ट गर्ने तथा जसले इन्टरनेट पृष्ठमा लि put्क राख्छन् उनीहरूबाट डाटा ल्याइएको छ कि प्रमाणित गर्न डाटा। ती डाटा वास्तविक छन्।
यदि रिपोर्ट गरिएको डाटा महत्त्वपूर्ण जलवायु अध्ययन संस्थानहरूद्वारा रेकर्ड गरिएको थिएन भने, यो डाटा बेकार हो किनकि यसलाई प्रमाणित गर्न सकिदैन।
उत्तरी लाइटहरू अवलोकन गर्न यस ग्रहमा सब भन्दा राम्रो ठाउँहरू
वनको कटाईले बिग्रिएको ग्लोबल वार्मिंगमा योगदान पुर्‍याउँछ